राजदूत नियुक्ति विवादपछि बोलाइएको नेकपा सचिवालय बैठक किन भयो स्थगित ? - Citizens Pati: सत्यतथ्य र निष्पक्षताको साथी
सीटीजन्स् पाटी अशोज १७, २०७७ अशोज १७, २०७७
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक आइतबारका लागि सरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एक्लौटी निर्णयबाट केही नियुक्तिहरु भएको आरोपछि पार्टीमा छलफल गर्न भन्दै शनिबारका लागि सचिवालय बैठक बोलाइएको थियो ।
यसअघि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकारको मुख्य सचिवमा शंकरदास बैगरी, अमेरिकाका लागि डा. युवराज खतिवडा र बेलायतका लागि लोकदर्शन रेग्मीलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । उक्त निर्णयको नेकपाभित्रै विरोध भइरहेको छ ।
यसअघिको सचिवालय बैठकले नै सरकारले चाल्ने कुनै पनि कदममा पार्टीको सहमति अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । यसैगरी सचिवालयमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन लगायतका विषयमा छलफल हुने तयारी थियो ।
शुक्रबार ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भएको भेटवार्तापछि शनिबार ४ बजे बैैठक बोलाउने सहमति भएको थियो । सचिवालय सदस्यहरुलाई आइतबार अपरान्ह ४ बजे बैठक बस्ने जानकारी शनिबार गराइएको एक सचिवालय सदस्यले जानकारी दिए ।